Marwda Ra’iisal Wasaare Cumae C/rashiid Sharmaarke oo lagu xiray Garoonka Magaalada Nairobi – STAR FM SOMALIA
Xaaska Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Somaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa waxaa toddobaadkan lagu xiray Garoonka Jomo Kenyatta Ee Magaalada Nairobi.
Marwo Caasha Yaasiin Xasan oo markaasi ka amba baxeysay Garoonka Jomo Kenyatta, kuna wajahneyd dalka Mareykanka, ayaa Sabtidii lagu qabtay Garoonkaasi, ka gadaal markii lagu eedeeyay in boorsadii ay wadatay laga helay rasaas.
Taliye Ku Xigeenka Booliska Magaalada Nairobi, Joseph Nthenge, oo la hadlay Warbaahinta Kenya, ayaa sheegay in boorsadii ay wadatay Marwada laga helay 16 xabadood.
Taliye Ku Xigeenka, ayaa ku waraamaya Boolisku inuu wado baaritaano la xiriira rasaastaasi iyo ujeedadii loo adeegsanaayay, dibna ay ka soo faah faahin doonaan wixii baaritaanada ka soo baxa.
Sarkaal Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ka tirsan, ayaa sheegay rasaastaasi inuu lahaa Wasiirka 1-aad ee Xukuumadda, isla-markaana ay si khaldan ugu dhacday boorsada afadiisa.
Xafiiska Ra’iisal Wasaare Sharmaarke, ayaa wada dadaal gacanta Kenya looga soo saaraayo Marwo Caasha Yaasiin Xasan, ka hor inta aynaan Maxkamad ka soo muuqan.
Waa markii ugu horeysay oo Garoomada Caalamka lagu xiro mid ka mid ah Marwooyinka Madaxda Dowladda, iyadoo markaasi lagu eedeynaayo in rasaas lagu qabtay.